Home > အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအိုလံပစ်ကော်မတီ
Jacques Rogge served as President of the Belgian National Olympic Committee from 1989 to 1992. He became President of the European Olympic Committees in 1989, IOC member in 1991 and Executive Board member in 1998. Jacques Rogge is the eighth IOC President, elected on 16 July 2001 at the 112th IOC Session in Moscow.
level and encompassing organisations administering such sports at national level (More information about IFs ).
The National Olympic Committees: their mission is to develop, promote and protect the Olympic Movement in their respective countries. The NOCs are the only organisations that can select and designate the city which may apply to organise Olympic Games in their respective countries. In addition, they alone can send athletes to the Games. (More information about NOCs )
Acting asacatalyst for collaboration between all parties of the Olympic family, from the National Olympic Committees (NOCs) , the International Sports Federations (IFs) , the athletes, the Organising Committees for the Olympic Games (OCOGs) , to the TOP partners, broadcast partners and United Nations agencies, the International Olympic Committee (IOC) shepherds success throughawide range of programmes and projects. On this basis it ensures the regular celebration of the Olympic Games, supports all affiliated member organisations of the Olympic Movement and strongly encourages, by appropriate means, the promotion of the Olympic values.
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအိုလံပစ်ကော်မတီ IOC ကို (၂၃.၆.၁၈၉၄) ရက်တွင် စတင်ဖွဲ့စည်းပြီးယနေ့ထိ ဥက္ကဌ(၈)ဦးရှိပါသည်။ ဥက္ကဌ၏ ပထမသက်တမ်းမှာ (၈)နှစ်ဖြစ်ပြီး ထပ်မံ၍ (၄)နှစ်သက်တမ်းကာလများ ကို ဆက်လက်ရွေးချယ်ခံနိုင်ခွင့်ရှိသည်။ လက်ရှိဥက္ကဌမှာ ဘယ်ဂျီယမ်နိုင်ငံသား၊ အိုလံပစ်လှေလှော် အားကစားသမား၊ ခွဲစိတ်ကုဆရာ၀န်ကြီး Dr.Jacques Rogge ဖြစ်ပြီး ၂၀၁၁ခုနှစ်တွင် စတင်ရွေးချယ် တာ၀န်ပေးအပ်ခြင်းခံရသည်။
ပါ၀င်ဖွဲ့စည်းပြီး အမျိုးသားအိုလံပစ်ကော်မတီပေါင်း = (၂၀၅)ခု
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအိုလံပစ်ကော်မတီအသိအမှတ်ပြု အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအားကစားအဖွဲ့ချုပ် = (၆၇)ခု
အိုလံပစ်အားကစားနည်းပေါင်း = (၃၅)နည်း
နွေရာသီအိုလံပစ်အားကစားနည််းပေါင်း = (၂၈)နည်း
ဆောင်းရာသီအိုလံပစ်အားကစားနည်းပေါင်း = (၇) နည်း
နိုင်ငံတစ်နိုုင်ငံအနေဖြင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအားကစားအဖွဲ့ချုပ်များ၏ အသိအမှတ်ပြု အားကစားနည်း အနည်းဆုံး (၅)နည်းရှိမှသာ အမျိုးသားအိုလံပစ်ကော်မတီကို ဖွဲ့စည်းခွင့်ရှိသည်။
၁၉၁၄ခုနှစ်၊ အိုလံပစ်ကွန်ဂရက်တွင် ပထမဦးဆုံးခင်းကျင်းပပြသခဲ့ပါသည်။ ၁၉၂၀ပြည့်နှစ်၊ ဘယ်ဂျီ ယမ်နိုင်ငံ Antwerp တွင် ကျင်းပသော အိုလံပစ်အားကစားပြိုင်ပွဲတွင် ပထမဆုံးလွှင့်ထူခဲ့သည်။
CITIUS - ALTIUA - FORTIUS
- အားကစား၏ အခြေခံအချက်များဖြစ်ကြသော ကိုယ်ခန္ဓာနှင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရည်အသွေးများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရန်။
- အိုလံပစ်အတွေးအခေါ်များနှင့် အိုလံပစ်လှုပ်ရှားမှုများ ကမ္ဘာတစ်၀န်းတိုးတက်ကျယ်ပြန့်လာစေရန်။
- နွေရာသီအိုလံပစ်အားကစားပြိုင်ပွဲများနှင့် ဆောင်းရာသီအိုလံပစ််အားကစားပြိုင်ပွဲများ ကျင်းပရေး အတွက် သတ်မှတ်ပေးရန်နှင့် ကျင်းပပေးရန်။
အားကစားလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေ၇န်အတွက် အားကစားပေးမှုများပြုရန် ။
- အမျိုးသားအိုလံပစ်ကော်မတီများနှင့်် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအားကစားအဖွဲ့ချုပ်များ ထောက်ပံ့ကူညီမှု များပြုရန်။
IOC (21) Commissions
- Cultural and Olympic Education
- Olympic Games and Youth Olympic Games Coordination
- Olympic Congress
- Olympic Philately, Numisnatic and Memorabilia
- Olympic Programme
- Olympic Solidarity
- Sport and Environment
- Sport and Law
- TV Rights and New Nedia
Olympic Winter Sports Federation - (7)
- International Bobsleighn and Tobogganing Federation (F.I.B.T)
- World Curling Federation (W.C.F)
- International Ice Hockey Federation(I.I.H.F)
- International Luge Federation(F.I.L)
- International Biathlon Union (I.B.U)
- International Skating Union (I.S.U)
- International Ski Federation(F.I.S)
Olympic Summer Sports Federation - (28)
- International Archery Federation (FITA)
- International Baskeball Federation(FIBA)
- International Amateur Boxing Association (AIBA)
- International Equestrian Federation(FEI)
- International Fencing Federation(FIE)
- International Football Association Federation (FIFA)
- International Hockey Federation(FIH)
- International Judo Federation(IJF)
- International Union of Mordern Pentathlon (UIPM)
- International Rowing Federation(FISA)
- International Shooting Sport Federation(ISSF)
- Federational International de Natation (FINA) (Aquatics)
- International Tabletennis Federation(ITTF)
- International Volleyball Federation(FIVB)
- International Federation of Associated Wrestling Styled(FILA)
- International Golf Federation(IGF)
- International Ruqby Board (IRB)
(The Ancient Olympic Games)
အိုလံပစ်အားကစားပြိုင်ပွဲသည် လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း (၂၈၀၀) (ခရစ်တော်မပေါ်မီ) B.C 776 ခန့်က ဂ၇ိနိုင်ငံ၊ အေသင်မြို့အနီးရှိ အိုလံပီယာတောင်ခြေ၊ ဂရိလူမျိုးတို့၏ ဘာသာရေးဆိုင်ရာပွဲလမ်းသဘင်များမှ စတင်ခဲ့ပါသည်။ ပြိုင်ပွဲများကို (၄)နှစ်တစ်ကြိမ်ကျင််းပခဲ့ပြီး၊ B.C(600) တွင် မြင်းစီပြိုင်ပွဲ၊ ငါးမျိုးစုံပြိုင်ပွဲ (အလျားခုန်၊ လှံတန်ပစ်၊ သံပြား၀ိုင်းပစ်၊ အပြေးပြိုင်ခြင်း၊ နပန်းပြိုင်ပွဲ)လကေ်၀ှ့ပြိုင်ပွဲတို့ ပါ၀င်ပြီး ပြိုင်ပွဲကို (၅)ရက်ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ ပြိုင်ပွဲကာလတွင် ယာယီစစ်ပြေငြိမ်းကြပြီး အမျိုးသားများ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင် ကြည့်ရှုခွင့်ရှိသည်။ သံလွင်ခက်နှင့် ပြုလုပ်ထားသော သရဖူကိုဆုချီးမြှင့်သည်။ ရောမဘုရင်(Alexander the Great) လက်ထက်တွင် အားကစားသမားများ၏ ဆုလာဘ်မျှော်ကိုးမှု ကြီးထွားလာခဲ့သဖြင့် အားကစား တန်ဖိုးနှင့် အရေးပါမှုမှာ မှေးမှိန်ခဲ့သည်။ AD (393) - Theodisius I ဘုရင်လက်ထက်အိုလံပစ်အားကစား ပြိုင်ပွဲများ ရပ်ဆိုင်းပိတ်ပင်ခဲ့ပြီး AD(426) Theodisius II ဘုရင်လက်ထက်တွင် အားကစားအဆောက် အအုံများအားလုံး အမိန့်ထုတ်ဖျက်ဆီးခဲ့သည်။
(The Modern Olympic Games)
(၁၆.၆.၁၈၉၄)မှ (၂၃.၆.၁၈၉၄)အထိ ပြင်သစ်နိုင်ငံ၊ ပဲရစ်မြို့(SORBONNE) တက္ကသိုလ်တွင် အပျော်တမ်းအားကစားဆိုင်ရာ လေ့လာချက် ကွန်ဂရက် ကျင်းပခဲ့ပြီး ကွန်ဂရက်ဆုံးဖြတ်ချက်များအရ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအိုလံပစ်ကော်မတီ (International Olympic Committee IOC) ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး ပထမအကြိမ် ခေတ်သစ်အိုလံပစ်အားကစားပြိုင်ပွဲကို (၁၈၉၆)ခုနှစ်တွင် ဂရိနိုင်ငံ၊ အေသင်မြို့၌ စတင် ကျင်းပပေးခဲ့သည်။
IOC ဖွဲ့စည်းခြင်းကို အကြောင်းပြု၍ နှစ်စဉ် ဇွန်လ(၂၃)ရက်နေ့ကို "Olympic Day" အထိမ်း အမှတ် အဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့သည်။
Source URL: http://spedmyanmar.com/content/%E1%80%A1%E1%80%95%E1%80%BC%E1%80%8A%E1%80%BA%E1%80%95%E1%80%BC%E1%80%8A%E1%80%BA%E1%80%86%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%A1%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%9C%E1%80%B6%E1%80%95%E1%80%85%E1%80%BA%E1%80%80%E1%80%B1%E1%80%AC%E1%80%BA%E1%80%99%E1%80%90%E1%80%AE